Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadka Hindiya: Diyaaradaha Cusub ee Horizon
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Qeybta duulimaadyada ee Hindiya, sida ku dhawaad ​​dadaal kasta oo socdaal iyo dalxiis, waligeed ma laha daqiiqad caajis ah, iyadoon loo eegin haddii waqtiga la joogo uu yahay mid togan ama mid taban. Waqtigan xaadirka ah, si kastaba ha ahaatee, wuxuu leeyahay dhammaan muuqaalada wanaagsan.
Jet Airways ayaa laga yaabaa inay ku soo noqoto dib -u -dhalashada cusub, iyada oo maalgelin iyo shaqaale ka heleysa ilo cusub.
Akasa Air ayaa laga yaabaa inay duusho ka hor dhammaadka sannadkan iyada oo ay si weyn ugu mahadcelinayaan maal -qabeennada bilyaneerka ah, Rakesh Jhunjhunwala.
Vistara, Air Asia India, iyo Air India ayaa sidoo kale rajeynaya inay u arkaan xoogaa koror ah shirkadaha diyaaradahooda.
Waqtigii COVID-19 uu ahaa-welina uu yahay-oo ku habsaday burbur duulimaadka, dalxiiska, iyo guud ahaan nolosha xaqa ah, waxaa soo baxaya warar u ekaan kara muusig dhegaha, gaar ahaan kuwa safra.
Kadib wax badan oo ka dhacayay shirkadaha diyaaradaha waxay ku saabsan yihiin luminta malaayiin doolar iyo crores iyo yuro - waxaad magacowdaa lacagta - oo wajahaya xiritaanno, oo aan lagu xusin kala -bixintii Air India ee mar la qiimeeyay, waxaa jira ugu yaraan 2 shirkadaha diyaaradaha ayaa imanaya goobta Hindiya iyo cirka mustaqbalka aan aadka u fogayn.
Waxaa jira hadal dhab ah oo ku saabsan burburtay Jet Airways ku soo noqoshada dib -u -dhalashada cusub, oo leh maalgelin iyo shaqaale ka imanaya ilo cusub. Maaddaama qorshayaashu ay u muuqdaan inay si dhakhso ah u soo kordhayaan, weli waxaa jira nuts iyo boolal badan oo weli la sii adkeyn doono ka hor inta safrayaashu aysan mar kale ku duulin diyaarad adeeg-buuxa ah.